Matokia ny Fanahy Masina | Fiangonan'Andriamanitra an'izao tontolo izao Suisse - Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra Suisse
Ny iray tamin'ireo loholonay dia nilaza tamiko vao haingana fa ny antony lehibe nanaovana batisa azy 20 taona lasa izay dia satria te handray ny herin'ny Fanahy Masina izy mba hahafahany mandresy ny fahotany rehetra. Tsara ny faniriany, saingy kely fotsiny ny fahatakarany (Mazava ho azy fa tsy misy olona mahazo ny fahalalana tonga lafatra, voavonjy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra isika, na dia eo aza ny tsy fitovian-tsika.
Ny Fanahy Masina dia tsy zavatra azontsika atao "mihodina" mba hahatratrarantsika ny "tanjontsika mandresy", karazana supercharger ho an'ny herintsika. Andriamanitra ny Fanahy Masina, miaraka amintsika sy ao amintsika Izy, omeny antsika ny fitiavana, ny fahatokiana ary ny fiarahana akaiky izay avelan'ny Ray ho antsika ao amin'i Kristy. Tamin'ny alàlan'i Kristy, nataonay Ray ho zanany ny zanany ary ny Fanahy Masina dia manome antsika fahatsapana ara-panahy hamantatra izany (Romana 8,16). Manome antsika fiarahana akaiky amin'Andriamanitra amin'ny alàlan'i Kristy ny Fanahy Masina, saingy tsy manala ny fahafahantsika manota izany. Mbola hanana faniriana diso, hevitra manosika, eritreritra ratsy, teny ratsy ary fihetsika isika.
Na dia te hiala amin'ny fahazarana manokana aza isika, dia hitantsika fa mbola tsy afaka manao izany. Fantatsika fa ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hanafahana antsika amin'ity olana ity, saingy noho ny antony sasany dia toa tsy manam-pahefana hampiala ny heriny amintsika isika.
Mino ve isika fa ny Fanahy Masina no tena miasa eo amin'ny fiainantsika - indrindra rehefa tsy misy zavatra tena mitranga satria tsy dia tena "tsara" Kristiana? Raha manohy miady amin'ny ota hatrany isika, ary toa tsy miova be mihitsy isika, moa ve isika milaza fa tapaka tanteraka isika, na dia tsy mahavaha ny olana aza Andriamanitra?
Zaza sy tanora
Rehefa tonga ao amin'i Kristy amin'ny finoana isika, nateraka indray, natsangan'i Kristy indray. Olom-baovao isika, olom-baovao, zazakely ao amin'i Kristy. Tsy manan-kery ny zazakely, tsy manana fahaiza-manao, tsy manadio ny tenany.
Rehefa mihalehibe izy ireo dia mahazo ny fahaiza-manao sasany ary manomboka mahatsapa fa be dia be ny zavatra tsy azon'izy ireo atao, izay indraindray miteraka fahasosorana. Izy ireo dia miondrika amin'ireo crayon sy sarety, matahotra fa tsy ho vitan'izy ireo izany na olon-dehibe. Saingy tsy manampy azy ireo ny fahasosorana - ny fotoana sy ny fanazaran-tena ihany no hanampy.
Mihatra amin'ny fiainantsika ara-panahy koa izany. Indraindray ny tanora kristiana dia omena tanjaka mahery vaika mba hialana amin'ny fiankinan-doha na amin'ny hatezerana mahamay. Indraindray dia "harena" ho an'ny fiangonana avy hatrany ny tanora kristianina. Matetika kokoa no hita fa miady amin'ny fahotana mitovy amin'ny taloha ny kristiana, samy manana ny mitovy toetra, mitovy tahotra sy fahasosorana. Tsy goavambe ara-panahy izy ireo.
Lazaina amintsika fa nandresy ny ota i Jesosy, nefa toa mbola manana ny heriny ihany ny ota. Fandresena ny toetran'ny ota ao anatintsika, saingy mbola itondrana antsika ho toy ny mpigadra azy izy. Ry olona mampalahelo antsika izao! Iza no hanafaka antsika amin'ny ota sy ny fahafatesana? Jesosy mazava ho azy (Romana 7,24-25). Efa nandresy izy - ary nataony fandresena io fandresena io.
Saingy tsy mbola mahita ny fandresena tanteraka isika. Tsy mbola hitantsika ny heriny amin'ny fahafatesana, na ny fifaranan'ny ota amin'ny fiainantsika. Araka ny lazain'ny Hebreo 2,8, dia mbola tsy mahita ny zava-drehetra eo ambanin'ny tongotsika isika. Ny ataontsika dia mahatoky an'i Jesosy. Matoky ny teniny fa nandresy ary matoky ny teniny fa mandresy ao aminy koa isika.
Na dia fantatsika fa madio sy madio ato amin'i Kristy isika dia te-hahita fandrosoana amin'ny fandresena ny fahotantsika manokana. Io dingana io dia mety toa miadana tsindraindray, saingy afaka matoky an'Andriamanitra isika hanatanteraka izay nampanantenainy - ao amintsika ary amin'ny hafa. Tsy akory ny asanay. Lohaheviny fa tsy ny antsika. Raha manaiky an'Andriamanitra isika, dia tsy maintsy vonona ny hiandry azy. Tokony ho vonona hatoky azy hanao ny asany eo amintsika isika amin'ny fomba sy amin'ny hafainganam-pandeha izay heveriny fa marina.
Matetika ny tanora dia mieritreritra fa mahalala bebe kokoa noho ny rainy izy ireo. Mieritreritra izy ireo fa fantatr'izy ireo ny fiainana ary afaka manao izay tsara amin'ny fiainany manokana izy ireo (Mazava ho azy fa tsy ny tanora rehetra no toy itony, fa ny stereotaype dia miankina amin'ny porofo vitsivitsy).
Indraindray kristianina isika dia afaka mieritreritra fomba mitovy amin'ny tanora. Mety manomboka mieritreritra isika fa ny "fitomboana" ara-panahy dia mifototra amin'ny fitondran-tena mety, izay mahatonga antsika hieritreritra fa ny toerantsika eo anatrehan'Andriamanitra dia miankina amin'ny fomba tsara ny fitondran-tenantsika. Raha manana fitondran-tena tsara isika dia afaka maneho fironana manambany ny olona hafa tsy dia tsara tahaka antsika. Raha tsy mitondra tena tsara isika dia mety ho resin'ny famoizam-po sy fahakiviana ary mino fa navelan'Andriamanitra isika.
Saingy Andriamanitra tsy mangataka antsika hanao ny tenantsika ho marina eo anatrehany; mangataka antsika hatoky azy, ilay manamarina ny ratsy fanahy (Romana 4,5) izay tia antsika ka manavotra antsika noho ny amin'i Kristy.
Rehefa matotra ao amin'i Kristy isika dia miorina mafy amin'ny fitiavan'Andriamanitra, izay aseho ho antsika amin'ny fomba avo indrindra ao amin'i Kristy (1 Jaona 4,9). Rehefa mitoetra ao anatiny isika dia manantena ilay andro izay voalaza ao amin'ny Apokalypsy 21,4: «Ary hofafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsy hisy fahafatesana intsony, ary tsy hisy intsony ny fijaliana, ny fitarainana na ny fanaintainana ; satria lasa ny voalohany. »
Rehefa tonga io andro io, Paul, dia hovana vetivety isika. Ho lasa tsy mety maty, tsy azo lavorary, ary tsy azo ihodivirana isika (1 Kor. 15,52-53). Manavotra ny ao anaty Andriamanitra fa tsy ilay ivelany fotsiny. Izy no manova ny toetrantsika anaty indrindra, avy amin'ny fahalemena sy ny tsy fahatanterahana ho amin'ny voninahitra ary indrindra ny tsy fahotana. Amin'ny feon'ny trompetra farany dia hiova isika ao anatin'ny indray mipi-maso. Avotra ny vatantsika (Romana 8,23), fa vao mainka aza ho hitantsika amin'ny tenantsika ny nanamboaran'Andriamanitra antsika ao amin'i Kristy (1 Jaona 3,2). Ho hitantsika amin'ny mazava fa ny tena tsy hita maso izay nataon'Andriamanitra tao amin'i Kristy.
Ny fahotantsika taloha dia resy sy noravan'i Kristy. Maty tokoa izy. "Fa efa maty ianao", hoy i Paul, "ary ny fiainanao miafina amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra." (Kol. 3,3). Ny fahotana izay "azontsika niniana mora" ary 'miezaka mandatsaka » (Hebreo 12,1) tsy anisan'ilay lehilahy vaovao izay ao amin'i Kristy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Manana fiainana vaovao ao amin'i Kristy isika. Rehefa ho tonga Kristy, dia hahita ny tenantsika tahaka ny nataon'nay Ray ao amin'i Kristy isika. Ho hitantsika ny maha-tena antsika, toy ny tonga lafatra ao amin'i Kristy, izay fiainantsika marina (Kolosiana 3,3: 4). Noho izany antony izany, satria efa maty sy nitsangana niaraka tamin'i Kristy isika dia "mamono" (Andininy 5) izay mbola eto an-tany.
Tsy naharesy an'i Satana fotsiny isika ary nanota sy maty tamin'ny alàlan'ny ran'ny Zanak'ondry (Apokalypsy 12,11). Amin'ny alàlan'ny fandresen'i Jesosy Kristy no ahazoantsika fandresena amin'ny ota sy ny fahafatesana fa tsy amin'ny alalan'ny ady ataontsika amin'ny ota. Ny tolona miady amin'ny ota dia fanehoana ny maha-eo amin'i Kristy antsika, fa tsy fahavalon'Andriamanitra intsony isika, fa ny sakaizany, amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina amin'ny fifandraisana aminy, izay miasa ao amintsika, ny sitrapo ary ny fanatanterahana. mankasitraka an'Andriamanitra (Filipiana 2,13).
Ny tolona miady amin'ny ota dia tsy ny fahamarinantsika ao amin'i Kristy. Tsy mitondra fahamasinana Izy. Ny fitiavan'Andriamanitra sy ny hatsaram-panahiny amintsika ao amin'i Kristy no antony, tokana ihany, ho an'ny fahamarinantsika. Hamarinina, navotan’Andriamanitra tamin’ny alalan’i Kristy tamin’ny ota rehetra sy ny tsy fahatokisan-tena rehetra satria feno fitiavana sy fahasoavana Andriamanitra - ary tsy misy antony hafa. Ny ady ataontsika amin'ny ota dia vokatry ny hery vaovao sy rariny nomen'i Kristy antsika fa tsy ny antony hanaovana izany. Maty ho antsika i Kristy fony mbola mpanota isika (Romana 5,8).
Halantsika ny ota, miady amin'ny ota isika, maniry ny hisorohana ny fanaintainana sy ny fijaliana ateraky ny ota ho antsika sy ho an'ny hafa satria Andriamanitra efa nanangana antsika velona ao amin'i Kristy ary miasa ao anatintsika ny Fanahy Masina. Satria ao amin'i Kristy isika, dia miady amin'ny ota ka "manindrona antsika mora" (Heb. 12,1). Saingy tsy fahazoana fandresena amin'ny alàlan'ny ezaka ataontsika manokana no ataontsika, tsy amin'ny alàlan'ny ezaka ataontsika nohamafisin'ny Fanahy Masina ihany. Mahazo fandresena amin'ny alàlàn'i Kristy isika, amin'ny alàlan'ny fahafatesany sy ny nitsanganany tamin'ny maty ho zanak'Andriamanitra tonga nofo, Andriamanitra ao amin'ny nofo ho antsika.
Efa nanao izay rehetra ao amin'i Kristy Andriamanitra dia ilaina amin'ny famonjena antsika ary efa nomeny antsika izay rehetra ilaintsika amin'ny fiainana sy ny fahamendrehana, amin'ny fiantsoana antsika hahafantatra azy ao amin'i Kristy. Nataony izany satria tena manjary tsara be izy (2 Petera 1, 2-3).
Ny Bokin'ny Apokalipsy dia milaza amintsika fa tsy ho avy ny fotoana tsy hisian'ny fihobiana, ny ranomaso, ny fijaliana ary ny fanaintainana - ary izany dia tsy hisy fahotana intsony satria fahotana, mijaly nateraky. Tampotampoka teo, fotoana fohy, ny haizina dia hifarana ary tsy hanota intsony ny ota ka mahatonga antsika hieritreritra fa mbola gadra antsika izy. Ny fahafahantsika marina, ny fiainantsika vaovao ao amin'i Kristy, dia hamirapiratra aminy miaraka amin'ny voninahiny mandrakizay. Mandritra izany fotoana izany dia mitoky ny tenin'ny fampanantenany izahay - ary izany dia zavatra iray tena tokony hodinihina.